Alaab -qeybiyeyaasha alaabta xoolaha iyo Warshadda - Shiinaha Badeecadaha xayawaanka ee soo -saareyaasha
Bacaha saxaro -siinta ee saldhigga qashinka xayawaanka ee biraha leh boorka calaamadda
Waxyaabaha: xaashida galvanized
Cabbirka: 190cm H.
Naqshad la habeeyay, xirmo, midab ayaa la aqbali doonaa.
Furaha biraha oo tayo sare leh haya & Hangool Leash Hanger
Soo jiid jillaab qurxinta derbiga qol kasta.
Cabbirka la heli karo: 6 ”l, 9” L.12 ”L.
Dhammee: Budada waarta oo lagu daboolay midab madow, midab cad.
Si Weyn Loo Adeegsado: Qabso xariga eyga, furayaasha, bacaha iwm Kaliya maahan naqshad jillaab, sidoo kale qurxinta gidaarka.
Saldhigga qashinka xayawaanka eeygu wuxuu bixiyaa tayo sare leh kharash dhaqaale. Saldhigga xayawaankeenna eeygu wuxuu ka kooban yahay mid aan baaba'ayn, aan daxalayn, darajo ganacsi, bir sare oo Aluminium ah. Waari kara, wax ku ool ah, oo si sahlan loo aqoonsan karo
Soo jiid jillaab qurxinta derbiga qol kasta. Hook Rack & Art Wall, oo leh Labrador. Wuxuu ku daraa wax weyn gurigaaga ama beertaada, ama hadiyad cajiib ah.
Qaansarka Warshada Darbiga, Coat Hanger Rack Hooks, Qabanqaabiyaha Hook Furaha, Qabatooyinka Furaha Furaha, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Farshaxanka Darbiga Birta,